Imbali ye-Apollo 1 Inhlekelele
Umonakalo wokuqala weNdawo yaseMerika
Ukuhlola kwendawo kungahle kubonakale kulula xa ezo iirumbethi zidudula ngaphandle kwesikrini sokuqalisa, kodwa zonke ezo zinto ziza nexabiso. Kudala ngaphambi kokuba kuqaliswe iseshoni zoqeqesho kunye noqeqesho lwe-astronaut. Ngethuba uqalise ukubeka rhoqo umngcipheko othile, uqeqesho lomhlaba luza kunye nenani elithile lomngcipheko. Iingozi zenzeke, kwaye kwimeko ye-NASA, i-US ibhekene neentlekele ekuqaleni kwintambo yoLwezi.
Nangona abadlali be-astronauts kunye nabaqhubi bee-epicopter baye bafaka ubomi babo engozini ngexesha lokuqeqeshwa kwendiza, ukulahleka kwe-astronaut yokuqala kwengozi yokuqeqesha kwanyusa isizwe. Ukulahleka kuka- Apollo 1 kunye nabasebenzi bayo abathathu ngoJanuwari 27, 1967, kwakuyisikhumbuzo esicacileyo seengozi abadlali bamazulu abajamelana nazo njengoko bafunda ukusebenzela kwindawo.
Inkathazo ye-Apollo 1 yenzeke njengoko abasebenzi be-Apollo / Saturn 204 (okwakubonwe kuyo ngexesha lokuvavanywa komhlaba) bebenzela ukuhamba kwe- Apollo yokuqala eya kubaphatha kwindawo. I-Apollo 1 yayisetyenziswe njengomsebenzi we-Earth-orbiting mission kunye nomhla wokuphakanyiswa kwayo uhleliwe ngoFebruwari 21, 1967. Abaqambi bezinto bahamba ngenkqubo ebizwa ngokuba yi-"plugs out". I-Module yabo yoMyalelo iqhutywe kwi-rocket yeSaturn 1B kwi-pad yokuqalisa njengoko bekuza kwenzeka ngexesha lokuqalisa. Nangona kunjalo, kwakungekho mfuneko yokwenza i-rocket. Uvavanyo lwaluyinto yokulinganisa ukuthatha abasebenzi ngokulandelelanisa konke ukulandelana ukusuka kwangoko bangena kwi capsule kude kube nexesha eliza kwenziwa ngalo.
Kwabonakala kubonakala ngokuthe ngqo, akukho mngcipheko kubadlali bezinto eziphilayo. Babefanelekile kwaye bekulungele ukuya.
Ukusebenza kwi-capsule kwakuyi-crew ehleliweyo eya kuqaliswa ngoFebruwari. Ngaphakathi kwakukho uVilil I. "Gus" Grissom (i-astronaut yesibili yaseMerika ukuba abuyele endaweni), u- Edward H. White II , (i-astronaut yokuqala yaseMerika "ukuhamba" kwindawo) kunye noRoger B.
Chaffee, (a "rookie" astronaut kwi-mission yakhe yokuqala). Babengamadoda aqeqeshwe kakhulu afuna ukugqiba le nqanaba elilandelayo loqeqesho lwabo kule projekthi.
Kanye emva kokuhlwa kwasemini, abasebenzi bangena kwi-capsule ukuqala uvavanyo. Kwakukho iingxaki ezincinci ukususela ekuqaleni kwaye ekugqibeleni, ukungaphumeleli kwintetho kubangele ukuba kubekwe kubalo ngo-5: 40 ntambama
Ngo-6: 31 ntambama ilizwi (mhlawumbi uRoger Chaffee) lathi, "Umlilo, ndivutha umlilo." Imizuzwana emibini kamva, ilizwi lika-Ed White lafika kwisiphaluka, "Umlilo kwi-cockpit." Ukuhanjiswa kwegama lokugqibela kwagqitywa kakhulu. "Balwa nomlilo omubi-masiphume." Vula "uphawule" okanye, "Sinomlilo omubi-masiphume." Okanye, "Ndibika umlilo ombi. Ndiya kuphuma. "Ukuhanjiswa kwaphela ngokukhala kwentlungu. Kwithuba lemizuzwana embalwa, izazi zezulu zazibhujiswa.
Amatangatye asasazeka ngokukhawuleza kwi-cabin. Ukugqitywa kokugqibela kwaphela imizuzwana eyi-17 emva kokuqala komlilo. Yonke inkcazelo ye-telemetry yalahleka kungekudala emva koko. Iimpendulo eziphuthumayo zithunyelwe ngokukhawuleza ukunceda.
Imizamo yokufumana kwiimbononci yayibhalwe ngeengxaki ezininzi. Okokuqala, i-capsule hatch ivaliwe ngamacwecwe afuna i-ratcheting ekhululekile ukukhulula.
Ngaphantsi kweemeko ezintle, kunokuthatha ubuncinane imizuzwana engama-90 ukuyivula. Ekubeni i-hatch yavuleka kwangaphakathi, uxinzelelo lwalufuneka luqhutywe ngaphambi kokuba luvule. Kwaba malunga nemizuzu emihlanu emva kokuqala komlilo phambi kokuba abahlanguli bangene kwikhabini. Ngalesi xesha, umoya ococekileyo we-oksijeni, oye wangena kwizinto eziphathekayo zekhabini, wawubangela ukuba umlilo usasazeke ngokukhawuleza.
Iqela elinokuthi labhubha phakathi kweemitha zokuqala ezingama-30 zokutshaya komsi okanye ukutshisa. Imizamo yokuvuselela yayingenamsebenzi.
Apollo 1 Emva
Ibamba lafakwa kwiprogram yonke ye- Apollo ngeli xesha abaphandi baqhubela phambili izizathu zengozi. Nangona iqela elithile lokutshaya komlilo lingenakuqulunqwa, ingxelo yokugqibela yebhodi yophando yatsho umlilo ngombane wombane phakathi kweencingo ezixhoma evulekileyo kwi-cabin.
Kwakuqhutyelwa phambili ngezinto ezininzi ezinokutsha kwi-capsule kunye ne-oxygen-enrichment atmosphere. Ngamanye amazwi, kwakuyi-recipe yomlilo ohamba ngokukhawuleza apho abaqhubi ababenako ukuphepha.
Kwiintlanganiso zexesha elizayo, ezininzi izinto eziphathekayo zatshintshwa zixhobo zokuzicima. I-oksijini engagqibekanga yatshintshwa ngumxube we-nitrojeni-oksijini ekuqalisweni. Ekugqibeleni, ukuchithwa kwakusungulwa kwakhona ukuvula ngaphandle kwaye kunokususwa ngokukhawuleza.
Umsebenzi wokulandela u-Apollo / Saturn 204 wabizwa ngokusemthethweni igama elithi "Apollo 1" ngokuhlonipha iGrissom, White, neChaffee. Ukuqaliswa kokuqala kwe-Saturn V (engazange ihlawulwe) ngoNovemba 1967 yonyulwe i- Apollo 4 (akukho misebenzi ekhe yabizwa ngokuba ngu-Apollo 2 okanye 3).
Yiyiphi i-Squad Line?
Iifomathi zeGoland Tournament ezidume kakhulu
Iphi Iphutha lokuthetha?
Ngaba Amaphephancwadi afela?
Indlela yokudibanisa isenzi elithi "Studiare" ngesiTaliyane
Igosa leMinos eKnossos
Ukuzaliswa kweZithuba kwiSenate yase-US
UJohn C. Calhoun: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
Ukufunda ukubhala: Imihla ngemihla yoNyaka omtsha